Wajiyadda daawashada ugu wanaagsan ee loogu talagalay Android Wear | Androidsis
Wajiyada ugu fiican ee loogu talagalay Android Wear
Jose Alfocea | | Codsiyada Android
Si la mid ah sida ku dhacda Android ee taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada, Android Wear ayaa u muuqda, oo ka mid ah wejiyadaha kale, heerkeeda habeynta iyo gaar ahaan suurtagalnimada in la habeeyo wejiyada saacadaha, oo sidoo kale loo yaqaanno wajiyadda saacadaha ama wajiyada daawashada.
In kasta oo tani ay tahay is-waafajin yar oo ku saabsan ereyada hawlgalka, habeynta wajiyadda saacadda ayaa kuu oggolaaneysa saacaddaada Android Wear waxay u egtahay sida dhabta ah ee aad u rabto, waa maxay runti noqo taada, mid gaar ah, mid lakala garto oo ka duwan dhamaan dadka kales. Tan awgeed, waxaa jira xulashooyin kaladuwan oo kaladuwan, laakiin maanta Androidsis waxaan kuugu soo bandhigeynaa qaar ka mid ah wajiyada saacadaha ugu fiican ee la shaqeeya labada Android Wear iyo Android Wear 2.0. Ma bilaabi karnaa?
1 Black Birta HD Daawashada Wajiga
2 2Feejo Daawasho Wanaagsan
3 Xumbo Widgets Cloud + Xidho
4 Pujie Black Watch Wajiga
5 Wejiyadaha Feejignaanta Feejignaanta
6 Daawo Waji - Ugu Yar & Elegant
Black Birta HD Daawashada Wajiga
Aynu ku bilowno mid ka mid ah wajiyada saacadaha ugu quruxda badan ee loogu talagalay Android Wear, Black Birta HD Daawashada Wajiga, waji saacad ku habboon oo loogu talagalay dadka xiisaha badan. Waxay bixisaa a qaab macdan ah u caday muuqaal madow, oo leeyahay walxaha la hagaajin karo iyada oo qayb ka ah astaamaha "Dhibaatooyinka" cusub ee lagu soo bandhigay Android Wear 2.0. Sidaa darteed, waxaad daawan kartaa xaaladda batteriga (taleefan iyo saacadba), Google Fit, xaaladaha cimilada ee hadda jira iyo inbadan.
Wejigan saacaddu waxay leedahay ficil ahaan wax kasta oo aad u baahan tahay waxayna kuu soo bandhigeysaa waxqabad aad u fiican halka waa mid ka mid ah dhinacyada ugu fudud, laakiin ugu fiican laga bilaabo Android Wear.
2Feejo Daawasho Wanaagsan
2Feejo Daawasho Wanaagsan es waji fudud oo waji ah, oo toos ah, laakiin taasi shaqadeeda si fiican ayey u qabataa. Sidoo kale u hoggaansanaanta Dhibaatooyinka ee Android Wear 2.0 si aad u habeyn karto walxaha si aad had iyo jeer u leedahay dhinacyo sida saacadda ama batteriga taleefanka, tirakoobka Google Fit, saacadda saacadda saacadda, saacadda iyo walxaha kale ee muhiimka u ah aragtida.
Fiiri inta ka hartay wajiyadda saacadaha ee ay soo saartay RichFace, qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa sidoo kale la jaan qaada Android Wear 2.0.
Xumbo Widgets Cloud + Xidho
Xumbada Widget iyo Wear Launcher waxay siisaa wajiga daawashada iswaafaqsan ee Android Wear 2.0. Asal ahaan waa barnaamij bilow ah oo noqda wajiga saacadda ee saacaddaada. Dabcan, waad arki doontaa waqtiga, laakiin sidoo kale waxaad yeelan doontaa noocyo kala duwan oo toobiye ah si aad dhaqso ugu furto codsiyada aad inta badan isticmaasho.
Dhig barnaamijyada Apple Watch-ka ah ee "goobo daruuro ah" barnaamijyada, xiriirada, iyo calaamadaha bogga shaashadaha taleefankaaga Android Wear ama daawashada.
Pujie Black Watch Wajiga
Pujie Black Watch Face waa waji kale oo waji ah oo loogu talagalay Android Wear heer sare ah tan iyo markii waxay ku siineysaa agabyada lagama maarmaanka ah si aad ugu qorshaysato waji saacad ku saleysan dookhaaga.
Waxay sidoo kale la jaanqaadi kartaa Dhibaatooyinka 'Android Wear 2.0 Complications', waxayna u shaqeyn kartaa sidii barnaamij wax lagu furto oo ay la socoto tuuryo ay ku socdaan barnaamijyada ku rakiban saacaddaada.
Ma lahan nooc bilaash ah sidaa darteed si aad u tijaabiso waa inaad bixisaa 1,49 Yuuro, oo ah qiime aad loo tixgeliyey iyadoo la tixgelinayo astaamaheeda.
Daawo Wajiga - Pujie Black
Wejiyadaha Feejignaanta Feejignaanta
Wejiyadaha Feejignaanta Feejignaanta waa codsi asal ah oo kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan aad wajiyada watch u gaar ah loogu talagalay Android Wear. Codsigu wuxuu ku siinayaa sheybaar tilmaamaha qaarkood oo halkaa ka bilaaba tijaabinta iyo tijaabinta. Waa run inay leedahay qalooca waxbarashad gaar ah, laakiin ha argagixin, haddii lagaa adkaado, waxaad kala soo bixi kartaa naqshadaha ay sameeyeen isticmaaleyaasha kale. Waxay hadda leedahay xul ah in ka badan 15.000 oo wajiyo daawasho ah, qaar badan oo ka mid ah waa bilaash qaarna qaar ayaa la siiyaa.
By habka, sidoo kale waa la jaan qaada Android Wear 2.0 iyo Dhibaatooyinka cusub.
Daawo Waji - Ugu Yar & Elegant
Oo waxaan ku dhamaynay xulkan wajiyadda daawashada ee loogu talagalay Android Wear Daawo Waji - Ugu Yar & Elegant, oo la jaan qaada Android Wear 2.0 iyo dhibaatooyinkiisa, waxay bixisaa in ka badan 20.000 oo naqshad waji ah iyo sidoo kale taageerida barnaamijyada gaarka ah sida Spotify, Pocket Casts iyo kuwa kale. Waxaa lagu qiimeeyaa € 1,59, waa mid ka mid ah barnaamijyada wajiga ugu fiican ee saacadaha la daawado.
U fiirso Waji - Ugu Yar & Elegant for Android Wear OS
Dabcan waxaa jira inbadan oo ka mid ah Dukaanka Play, labadaba lacag iyo lacag la'aan. Midkee ayaad isticmaashaa? Mid ka mid ah kuwa ku jira liiskan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Wajiyada ugu fiican ee loogu talagalay Android Wear
Pujie Black wuxuu burburiyaa batteriga saacadda wuxuuna ka dhigayaa taleefanka gacanta inuu dib u bilaabo marwalba marar badan ama is damiyo
Ku jawaab Milton
Twitter Lite, oo ah nooca iftiinka ah ee hagaajiya isticmaalka xogta iyo keydinta
Tijaabada xawaaraha: Samsung Galaxy S8 vs LG G6